HALKAAN KA AKHRISO W.W MOGADISHU TIMES 5-DEC-2019
Thursday December 05, 2019 - 08:23:09 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxweyne Farmaajo oo casho sharaf ku maamuusay ka qeyb-galeyaashii Shir weynaha Qaran ee Dhallinyarada Madaxweynaha JFS Md. Maxamed C/hi Farmaajo ayaa kulan casho sharaf ah ku ma amuusay dhallinyaro ka socotay dalladaha iyo ururrada heer Q
Madaxweyne Farmaajo oo casho sharaf ku maamuusay ka qeyb-galeyaashii Shir weynaha Qaran ee Dhallinyarada Madaxweynaha JFS Md. Maxamed C/hi Farmaajo ayaa kulan casho sharaf ah ku ma amuusay dhallinyaro ka socotay dalladaha iyo ururrada heer Qaran iyo heer Dowlad Go boleed ee ka qeyb galey Shirweynaha Qar an ee Dhallinyarada Soomaaliyeed 2019-ka. Madaxweynaha ayaa uga xog warramay dhallinyaradeenna qorsheyaasha ku qotoma awoodsiinta siyaasadeed iyo dhaqaale ee dhallinyarada, kuwaas oo Dowladdu ay ku bi xineyso horumarinta iyo xoojinta kaalinta ay ku leeyihiin hoggaaminta dalka. "Waxaan haatan u soconnaa in aan shac abka Soomaaliyeed ee dhallinyarada u bad an aan u soocelinno talada dalka, taladaas oo ka bilaabmata doorashada. Dhankooda dhallinyarada Soomaaliyeed waa inay naftoo da kula xisaabtamaan dadaalka ay dalkooda geliyaan iyo gacanta ay ka geystaan horu marka iyo dowladnimada."
Madaxweynaha ayaa xusay in tallaabo oyinka ay qaadday Dowladdu ee adkeynta midnimada iyo madaxbannaanida dalkeenna ay horseedday dib u soo celinta maqaamka dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin Gobolka iyo guud ahaan caalamka.
Intii kulanku uu socday, Wasiirka Ciyaa raha iyo Dhallinyarada DFS Marwo Khadiijo Maxamed Diiriye ayaa la wadaagtay Madax weynaha nuxurka Shirkii Qaran ee dhallinya rada, horumarka ay ku tallaabsadeen dhalli nyarada Soomaaliyeed sanaddihii la soo dhaafay, aragtidooda ku aaddan qorsheyaa sha Dowladda iyo caqabadaha heer Dowlad Goboleed iyo heer Federaal ee ay tahay in xalkeeda wadajir looga shaqeeyo.
Casho sharaftan maamuuska ah waxaa ka soo qeyb galay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Md. Cumar Maxamuud Maxamed, Agaasimaha Madaxtooyada Dr. Nuur Diiriye Xirsi (Fuursade), Maareeyaha Wakaaladda Horumarinta Dhismaha Soomaaliyeed Sarr eeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac, Xil dhibaanno ka tirsan BFS iyo Maamulka iyo ciyaartooyda Kooxda Soomaaliyeed ee dal ka Australia oo dalka u yimid hawlo samafal iyo in ay tartamo ciyaaro oo sare u qaadaya is dhexgalka bulshada ay la yeeshaan ciyaa rtooyda gudaha. DHAMMAAD
Maamulka Gobolka Banaadir oo sheeg ay in bilihii la soo dhaafay uu is bedel amni ka jiray Muqdisho
Guddoomiye kuxigeenka Amniga iyo Siya asadda G/Banaadir Maxamed C/hi Tuulax ayaa shir guddoomiyay kulan looga hadlay ay amniga Caasimadda oo u dhaxeeyay Maamulka Gobolka iyo Laamaha Amniga de gmooyinka oo ay ka soo qeyb galeen Guddoomiye kuxigeenada Amniga degmo oyinka. Kulank an ayaa lagu soo bandhigay warbixin amni oo ka hadleys ay is bedelada ka jira magaalada Muq disho iyo hoos u dhaca ku yimid dilalka iyo qarax yada ka dhici jiray ma gaalada. Guddoo miye kuxigeenka Amniga iyo Siyaasadda Maxamed C/llaahi Tuulax ayaa sheegay in is bedelka amni oo la ta aban karo uu bilihii la soo dhaafay ka jiray Muqdisho, taasna ay ku timid wada shaqe ynta laamaha amniga iyo shacabka.
Waxaa uu sheegay in bishii la soo dhaa fay ay hal degmo kaliya wax ka dhaceen, halkii degmo kaliya hal bil lagu dili jiray illaa 15 qof halka labaatan qaraxyo ku dhiman jireen.
"Degmooyinka qaar waxay marayaan in aanay waxba ka dhicin, ama degmo dhan bi shii hal qof lagu dilo, halkii bil walba lagu dili jiray 15 qof 20 kalena hal qarax, sida degm ada Yaaqshiid oo kale bil ka mid ah hal qof ayaa lagu dilay, taas waxay ka dhigan tahay in lix degmo in aysan bil wax ka dhicin”ayuu yiri Guddoomiye Tuulax oo intaa ku daray in uu yahay bilow fiican oo ay uga mahad celinayaan laamaha amniga.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in maalm ahan ay yaraadeen dilalka argagixisada, bal se dilal caadi ah oo ay geystaan kooxaha maleeshiyada iyo tuugada uu dhacay.
Si kastaba ha ahaatee labadii bilood ee la soo dhaafay amniga magaalada Muqdi sho ayaa soo hagaagayay, waxaana howlg alo ciidamada amniga ka sameeyeen qeybo ka mid ah degmooyinka lagu qabtay kooxo falal amni daro ka geysan rabay.
Khilaaf culus oo ka dhex aloosan Wasiir ka amniga Puntland iyo Guddoomiyaha G/Bari
M/Boosaaso ee G/Bari waxaa ka taagan Khilaaf ka dhex qarxay wasiirka amniga Pun tland Cabdisamad Maxamed Gallan iyo gud doomiyaha G/Bari, Cabdisamad Yuusuf Ma xamed (Cabdisamad Abwaan).
2da masuul ayaa sida la sheegay isku arag ti ka noqon waayey sida loo wajahayo xiisad da ka dhex aloosan wax-garadka gobolka Bari iyo xukuumadda uu hoggaamiyo Madax weyne Dani.
Waxaana haatan xabsiyada M/Boosaaso ku xiran inta badan siyaasiyiintii iyo odayaa shii dhaliilaha u jeediyey madaxda maamul ka Puntland, iyadoo ay xusid mudantahay in dulucda khilaafka soo kala dhex galay war-garadka gobolka Bari xukuumadda Dani uu ka dhashay walaac laga muujiyey heshiiska shirkadda DP World ay ku mamusho deke dda magaalada Boosaaso.
Inkasta oo wasiirka amniga Puntland iyo guddoomiyaha G/ Bari midkooda uusan ka hadlin khilaafkan iyo halka ay wax u marayaan hadana xubno qeyb ka ah ho wsha labada masuul ay ka wadaan gobolka Bari ayaa sheegay inay isku hayaan siyaasa dda ay xukuumaddu ku wajahayso bulshada wax qabadkeda dhalilsan eek u nool G/ Bari.
Wararkii Ugu Dambeeyay Qaraxii Lagu Dilay Guddoomiye Maxamed Yarow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Qaraxii Shalay lagu dilay Guddoomiyihii D/Awdheegle ee G/Sh/ Ho ose Maxamed Aweys Abu ukar oo loo yaqaanay Max amed Yarow.
Qaraxaas oo ahaa mii no nooca dhulka lagu aaso ah ayaa waxaa Gaariga uu la socday Guddo omiye Yarow lagula eegtay xili uu socdaal ku marayay inta u dhexeeya deegaanka Sab iib iyo D/Awdheegle ee Sh/Hoose.
Sidoo kale qaraxa uu ku dhintay Guddo omiyihii Awdheegle ayaa waxaa dhaawac uu kasoo gaaray saddex Askari oo ilaalo u ah aa, kuwaasi oo la socday gaariga uu qaraxu haleelay.
G/G/Sh/Hoose Ibraahim Cali Aadan Najax ayaa xaqiijiay geerida Maxamed Yarow, isag oona Degmada Awdheegle Guddoomiye ka ahaa lixdii sano ee lasoo dhaafay.
Goobta uu falka ka dhacay ayaa waxaa gaaray Ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka D/ Awdheegle, iyagoona halkaas ka soo qaad ay Meydka iyo Askartii dhaawaca uu soo ga aray, kuwaasi oo la geeyay degmadaas.
Ilaa iyo hada ma jirto cid sheegatay Mas ’uuliyada qaraxaas, hayeeshee qaraxyada noocaan oo kale ah ayaa waxaa inta badan sheegta Al-shabaab.
Xisbi siyaasadeed cusub oo la magac bax ay xisbiga dhaqaaqa Soomaaliyeed ayaa Shalay lagu daahfuray M/Muqdisho ee Mun aasibad xisbigaan lagu furayay ayaa lagu ca suumay dadweyne kala duwan oo ka socday qeybaha bulshada, sida aqoonyahanada, siy aasiyiinta, dhalinyarada iyo haweenka, si loogusoo bandh igo aragtida xisbigaan.
Xoghayaha xisbigaan, Dr, Siciid Yuusuf Maxamed ayaa tilmaamay ujeedada xisbig aan loo aas aas ay inay tahay in bulshada Soomaaliye ed lala wadaago in la aas aa say xisbi wata ujeedoo yinka madax banaan siyaasada hor ey uga jirtay Soomaaliya.
Xoghayaha garabka haweenka ee Xisbiga an, ayaa sheegtay inuu xisbigaan u istaagay hooyada iyo dhallaanka dayacan muhiimadu na ay tahay in la muujiyo doorkooda si ay mustaqbalka dhow uga qeyb qaataan doo rashooyinka dalka.
Guddoomiyaha guddiga fulinta xisbiga Fu' aad Maxamed Guhaad ayaa isna sheegay in mabaadiida xisbiga ay kamid tahay inuu hor umariyo dadka, dalka iyo diinta, waxaana uu shacabka ugu baaqay inay kamid noqdaan xisbigooda. G/xisbiga dhaqaaqa Sooma aliy eed, Cabdi Xaashi Seed, ayaa caddeey ay xisbigooda inuusan marnaba gacan saar la ahaandoonin cid kasta oo lid ku ah dowl ad Soomaaliyeed oo si sharci ah ku dhisan.
Kenya oo xayiraad dhinaca duulimaad yada ah kusoo rogtay Kismaayo
War kasoo baxay Hay’adda Duullimaadka rayidka Kenya ayaa waxaa amaro cusub oo dhinaca duulimaadka ah lagu soo rogay Diy aaradaha ka duula Garoonka Diyaarada ha M/kismaayo ee ku wajahan M/Nayrobi ee dalka Kenya. Amarkaan ayaa lagu shaaciy ey in Diyaaradaha ka baxa Kismaayo ee ku wajahan Nairobi ay sii maraan M/Wajeer si loogu sameeyo baaritaan la xiriira dhinaca Amniga.
14-kii Bishii la soo dhaafay ee Novemb er ee sanadkaan 2019 ayaa kulan ay M/Nayrobi ku yeesheen Madaxweynayaa sha Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxaa ay ku kala saxiixdeen heshiis ku saabsan in Diy aarada ka baxda Muqdisho ay si toos ah u tagto Nayrobi,balse kuwa ka baxa Magaalo oyinka kale ee dalka ay sii maraan M/Waje er. Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa dhiba ato waxaa ay kala kulmaan sii marista M/Wajeer oo siweyn loogu baaro,waxaana dhowr jeer Dowlaha Soomaaliya iyo Kenya ay kala saxiixdeen heshiis dhigayey in diyaa radaha ay si toos ah u tagaan Nairobi,balse Kenya ay ka baxday Kenya.
Dacwad laga gudbiyey Golaha Guurtida Soomaaliland
Siyaasiyiinta ku bahoobay Madasha Wad atashiga Somaliland ayaa waxaa ay Dacwad ka dhan ah Golaha Guurtida Soomaaliland u Gudbiyeen Maxkamadda Sare Ee Som aliland. Qoraal dacwad ah oo ay soo sa ar een Siyaasiyiinta ku bahoobay Madasha Wa datashiga Somaliland ayaa waxaa uu ku sa absan yahay inay kasoo horjeedaan Go’aan ka Golaha Guurtida ay muddo kordhinta dhawaan ugu sameeyeen Golaha Wakiil ada Soomaaliland.
Waxaa ay sheegeen in go’aanka golaha Guurtida uu yahay mid ka hor imaanayo Da stuurka Soomaaliland,isla markaana ay ra jeynayaan in Maxkamadda ay Go’aan ka gaari doonto dacwadooda.
Ciidamada DANAB ool-Shabaab deega ano kala wareegay
Ciidamo ka tirsan kuwa Kumaandoosta S oomaaliya iyo kuwa D/Goboleedka Jubbal and ayaa wax aa ay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen deeg aano ka tirsan gobolka Jubba da Hoose,halkaas oo ay ku sugnaayeen Xu bno ka tirsan Al-ShabaabSaraakiisha holw galka hoggaamineysa ayaa waxaa ay shege en in uu howlgalka ahaa mid Al-Shabaab loo ga saarayay deegaano dhowr ah,isla marka naa laga sameeyey deegaannada,Canjeel, Kuba-Kibir iyo Janaay Cabdalle oo kamid ah gobolka Jubbada hoose. Sidoo kale waxaa ay sheegeen in dhama an tuulooyinkii ay howlgalka ka fuliyeen ay is aga baxeen Al-Shabaab,isla markaana ay la wareegeen Ciidamada kumaandoosta Soo maaliya ee DANAB iyo kuwa Jubbaland.
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaannada howlgalka laga same eyey ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidam ada DANAB iyo kuwa Jubbaland ay weli ku sugan yihiin deegaannadaas,isla markaana mararka qaar la maqlayo rasaas goos goos ah.
Faysal Cali Waraabe oo ka hadlay xiisad da Somaliland
Mudooyinkan dambe waxaa Somaliland ka jiray muran siyaasa deed oo u dhexeeyay Xukuumada iyo Asxaab ta mucaaradka, iyada oo guddi is xilqaamay uu dhex dhexaadin ka dhex wado 2da dhinac.
Dhinaca kale, baarlamaanka ayaa lacago ka jaray miisaan iyaddii xisbiyada. Guddoomiya ha Xisbiga UCID ee Soomaaliland feysal Ca li Waraabe ayaa sheegay in Xubnaha gud diga doora shooyinka ee leysku heysto ay yih iin kuwo Sharci darro ah oo aan soo marin nidaamka iyo Dastuurka Soomaaliland.
Sidoo kale waxaa uu ka horyimid muddo kordhinta loo sameeyey xubnaha labada Go le ee Soomaaliland iyo miisaaniyaddii laga jaray Xisbiyada Soomaaliland.
Wasiir Goodax Barre oo la kulmay Wafdi ka socda Hay’adda UNICEF
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada ee XFS Xildhibaan C/hi Goodax Barre ayaa waxaa Mmuqdi sho uu kulan ku la qaatay wakiil ka hay’adda UNI CEF ee Sooma aliya Werner. Kulanka ayaa 2da mas’uul wa xaa ay uga wada hadleen mashariicda hor umarineed ee hay’adda UNICEF ka fuliso Soomaaliya gaar ahaan dhanka waxbarash ada iyo qodobo kale sida uu sheegay Wasi irka Waxbarashada.
"Waxaan Shalay kulan kula qaatay M/mu qdisho wakiilka hay’adda UNICEF ee Soom aaliya,mr Werner,waxaana ka wada hadal nay mashariicda horumarineed ee hay’adda UNICEF ka fuliso Soomaaliya gaar ahaan dhanka waxbarashada ayuu yiri”Wasiir Goodax Barre.
Sidoo kale waxaa uu sheegay Wasiirka in ay isla garteen sidii loo sii xoojin laheyn xari irka Wanaagsan ee ka dhaxeeya Wasaarad da Waxbarashada iyo Hay’adda UNICEF.
Kulan dhexmaray Wasiir Beyle iyo Safiir ka Mareykanka ee Soomaaliya
Wasiirka W/Maaliyada XFS Cabdiraxm aan Duc aale Beyle iyo Safiirka Mareykanka ee Somalya Amb. Donald Yamamoto ayaa Shalay kulan ku yee shay M/Muqdi sho. Kulanka ayaa looga wada hadlay hawlaha dib u habaybta Maaliya da dalka iyo horumarka laga sameeyay Ba rnaamijka deyn cafinta ee IMF ay hormuud ka ka tahay Wasiiradda Maaliyadda Xukuum adda.
Ambassador Yamamoto ayaa sidoo kale Wasaaradda Maaliyadda ku bogaadiyay Hin dse sharciyeedyada dhaqaale ee dhawaan 2da Aqal ee Baarlamaanka meelmariyay ay ka mid yihiin, kan Iibka Qaranka iyo furdooy inka. "Barnaamijka deyn cafinta iyo horumari nta dhaqaalaha dalka waa mudnaanteena 1aad si aan dalkeenna iyo dadkeena u ga arsiino horumar wanaagsan iyo barwaaqo” ayuu yiri Wasiir C/raxmaan Ducaale Beyle.
Shirka Madaxda Dalalka NATO Oo Shalay Ka Furmay London
Shirkii 70aad ee Madaxda Gaashaan bu urta NATO oo ka qabsoomay M/London ee dalka England ayaa looga hadlay dhowr arr imood sida Weerarkii Dowladda Turkigu ku qaaday tuulooyin ku yaala gudaha dalka Sy ria kaas oo dalalka Ururka ku jira ay ka ca roodeen, weerarada dhanka Internet-ka ah ee China iyo hadal muran weyn ka dhex dha liyay Ururka oo uu jeediyay Madaxweynaha France kaas oo ahaa in NATO maskax ahaan u dhimatay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Tru mp ayaa shirka oo Shalay soo xirmi doona ku dhaleeceeyay Dhigiisa France Hadalkii ka soo yeeray oo uu leeyahay Trumo waxaa uu nagu ahaa xadgudub.
Madaxda Shirka oo ka kooban 29 xubn ood ayaa hoosta ka xariiqay in muhiimadda ay tahay in wada jir la ahaado isla markaana la xaliyo khilaafaadka haatan ka dhex jira Gaashaanbuurta.
Wasiirka Cadaalada oo guddomiyey Shir ay ka qeyb galeen Hay’ado Caalami ah
M/Muqdisho waxaa Shalay ka qabsooma y shirka 3biloodlaha ah ee Rule of Law worki ng group ee ay isugu yimaadaan dhammaan Hay’adaha Bahda Cadaaladda Heer Feder aal iyo Heer Dawlad-goboleed iyo dhinaca kale Deeqbixiyeyaasha taageera Bahda Cad aaladda Soomaaliya iyo Saaxiibada la sha qeeya ee isugu jira Hay’adaha QM iyo kuwo kale oo caalami ah.
Shirka waxaa wada shir guddoominayey W/W/Cadaadda Abuukaate Xasan Xuseen Xaaji iyo Safaaradda Netherlands waxaana la joogay Madaxa M/Yurub, Madaxa Fulinta UNSOM, Xeer-illaaliyaha Qaran iyo Wasiirka Cadaaladda Koonfur-galbeed.
Shirka ayaa waxaa lagu soo wada band higay wax qabadkii sanadkaan dhamaanaya iyo hormarka ay ku tilaabsaseen Hay’adaha Bahda Cadaaladda ee Heer Federaal iyo Maamul Gob aleed.
Taliyihii Booliska G/Nugaal Oo Shaqo Joojin Lagu Sameeyay Iyo Sababta Keentay
Wareegto kasoo baxday Xafiiska Taliyaha Ciidanka Booliska dowlad Goboleedka Punt land S/Guuto Muxiyadiin Axmed Aw Muuse ayaa waxaa shaqadii looga joojiyay Taliyaha Qeybta Booliska Gobolka Nugaal.
G/Sare Mu’min Cabdi Shire oo ahaa Taliyihii Booliska Nugaal ayaa waxaa lagu eedee yay inuu sameeyay amar diido iyo xil guda sho la’aan, isla markaana waxaa uu Taliye Muxiyadiin Axmed Go’aan ku gaaray inuu shaqo joojin ku sameeyo.
Sidoo kale waxaa la sheegay in Taliy aha Ciidanka Booliska Puntland iyo Taliyaha shaqo joojinta lagu sameeay uu ka dhexeey ay Khilaaf xoogan, kaasi oo sababay in 2da dhinac ay dhexmari weyso washaqeyn toos ah.
Shaqadii Taliyaha Qeybta Booliska G/Nu gaal ayaa waxaa sii wadi doona ku-xigeenk iisa iyo Saraakiisha Booliska Gobolkaas.
Al-Shabaab Oo War Kasoo Saartay Dilka Guddoomiyihii Degmada Awdhe egle
Gelinkii dambe ee Shalay ayaa inta u dhexeeysa deegaanka sabiib iyo degmada Awdheegle ee G/Sh /Hoose waxaa ka dha cay qarax sababay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaaw ac.
Qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka la geliyo ah ayaa waxaa lala eegtay gaari uu la socday Guddoomiyihii D/Awdheegle Maxam ed Aweys Abuukar oo loo yaqaanay Maxam ed Yarow, kaasi oo uu ku geeriyooday qar axaas.
Sidoo kale qaraxa ayaa waxaa dhaawac uu kasoo gaaray 3 Askari oo ilaalo u ahaa Guddoomiyaha, kuwaasi oo saarnaa gaari ga. War qoraal ah oo lagu daabacay baraha Internet-ka Al-shabaab ayaa waxaa ay ku sheegteen Mas’uuliyada qaraxii lagu dilay G/yihii Degmada Awdheegle Maxamed Yar ow. Al-shabaab ayaa sidoo kale sheegtay in Guddoomiye Maxamed Yarow xiliga la qarxi nayay uu saarnaa gaari nooca xamuulka qa ado ah, waa sida hadalka loo dhigay
G/Sh/Hoose ayaa waxaa dhowr jeer qar axyo kala duwan oo ka dhacay lagu dilay Ma s’uuliyiin ka tirsan Gobolkaas iyo Saraakiil ka tirsan Ciidanka DFS.
Kulan Looga Hadlayay Amniga Oo Lagu Qabtay M/ Muqdisho
M/Muqdisho ayaa Caawa waxaa kulan lo oga hadlaayay amniga Caasimadda ku yeeshay Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Maamulka Gobolka Banaadir iyo Guddoomiye ku-xigeenada amniga ee Degmooyinka Gobolka.
Kulanka ayaa waxaa shir Guddoominay ay Maxamed Cabdullaahi Axmed Tuulax, wa xaana ka qeyb galay Guddoomiye ku-xigeen ada amniga Degmooyinka Gobolka Banaad ir iyo Sarakiisha laamaha amniga dowlada.
Inta uu kulanka socday ayaa waxaa loo ga hadlay xaadalihii ugu dambeeyay ee am niga M/Muqdisho iyo sidii loo dardargelin lah aa hawlaha Amniga iyo Siyaasadda ee ka socda degmooyinka Gobolka.
Mas’uuliyiinta ayaa ka wada hadlay u diy aarar garoowga Gurmadka degdega ee Roo babka mahiigaanka ee kusoo wajahan dee gaano ka tirsan Soomaliya, iyadoona hee gan la geliyay Saldhigyada Booliska ee ku yaalla Gobolka Banaadir.
Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo si yaasadda Maxamed Cabdullaahi Axmed Tu ulax oo warbaahinta la hadlay ayaa waxaa uu sheegay in amniga Caasimadda haatan uu yahay mid wanaagsan, isla makaana ay yaraadeen weeraradii iyo dilalkii ka dhici jiray Magaalada.
Sidoo kale waxaa uu tilmaamay Tuulax in warbixino uu ka dhageystay laamaha am niga dowladda loogu sheegay in bilihii la soo dhaafay amniga Caasimadda laga gaaray horumar. Ugu dambeyntii Maxamed C/hi Ax med Tuulax ayaa u mahadceliyay laamaha amniga dowladda Soomaaliya, isagoona kula dardaarmay inay sii xoojiyan sugida am niga Magaalada Muqdisho.
Caruur Ku Geeriyootay Deegaan Ka Tirsan Gobolka Bakool
Ilaa 7-da caruur ah ayaa la sheegayaa in cuddurka shuban biyoodka uga dhinteen de egaanka Caato oo ka tirsan gobolka Bakool mudo 48 saa cado od gudo hood ah.
Waxaa geeri da 7-da caru urta ah inoo xaqiiiyey Gud doomiyaha deegaanka Caato Dubad Xasan Cali oo la hadlay warbaahinta, isagoo ku su gan deegaanka Caato ee G/ Bakool oo dhibaatadu ka dhacday.
Dhinaca kale kusimaha Guddoomiyaha G/Bakool Cabdullaahi Maxamed Nuur (Sna ke) ayaa sheegay in cudurka shuban biyood ka ka dilaacay deegaano badan oo katirsan gobolka Bakool.